Ny andiany Echo 3 dia hanasongadinana ilay mpilalao sarimihetsika Luke Evans | Avy amin'ny mac aho
Echo 3 series dia hanasongadina ilay mpilalao sarimihetsika Luke Evans
A tapaky ny taon-dasa, niresaka momba ny iray amin'ireo tetik'asa samihafa niasan'i Apple izahay hanitarana ny atiny azo jerena amin'ny sehatra video streaming-ny. Miresaka ny andian-tantara Echo 3 aho, andiany notarihin'i Mark Goal, mpanoratra ny sarimihetsika On Hostile Land izay nanjary Kathryn Bigelow talen'ny sarimihetsika voalohany nahazo Oscar avy amin'ny Hollywood Academy.
Ny vaovao farany mifandraika amin'ity tetikasa ity dia avy amin'ny famoahana Isan-karazany. Araka ny voalazan'ity haino aman-jery ity, ny andiany 10-andiany Echo 3 dia hilalaovan'ny mpilalao sarimihetsika Luke Evans ho mpilalao fototra amin'ny anjara asan'i Bambi (anarana mahaliana). Ity andiany ity hotifirina amin'ny teny anglisy sy espaniola izy io ary amin'izao fotoana izao dia fantatra izay mety ho daty famoahana amin'ny Apple TV +.
Echo 3 dia hapetraka any Amerika atsimo ary hanaraka an'i Amber Chesborough, tanora mpahay siansa marani-tsaina izay lasa mason'ny ankohonany. Rehefa manjavona eo amin'ny sisintany manelanelana an'i Kolombia sy Venezoelà izy, ny rahalahiny Bambi (Luke Evans) sy ny vadiny (samy manana traikefa ara-tafika sy taloha feno hadalana) fitsangatsanganana hitady azy amin'ny tantara an-tsehatra miaraka amina fiafenana ady miafina.
Luke Evans dia fantatra amin'ny fampisehoana an-tsarimihetsika La Belle et la Bête, Ireo musketeer 3 miaraka amin'i Milla Jovovich, Cristoph Waltz, Orlando Bloom ary Mads Mikkelsen ankoatry ny hafa ankoatry ny sarimihetsika Immortals miaraka amin'i Stephen Dorff sy Mickey Rourke ary mandray anjara amin'ny de Haingam-pandeha 6 ary amin'ny trilogy The Hobbit.
Mark Boal dia tsy hanao ny adidy mivantana, fa koa mandray anjara amin'ny famokarana mpanatanteraka ihany koa miaraka amin'i Jason Horwitch. Ao amin'ny asa famokarana dia ahitantsika an'i Peter Traugott, Mark Boal, Omri Givon, Eitan Mansuri ankoatry ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Echo 3 series dia hanasongadina ilay mpilalao sarimihetsika Luke Evans
Apple dia namoaka Safari 14.1 ho an'ny macOS Mojave sy Catalina